မျိုးသာကီအတွက် ရဲဝံ့ ဒို့ အာဇာနည်: October 2011 “၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ လူအခွင့်အရေး၏ တိုက်ပွဲနှစ်” မြန်မာ့သွေးအနီရောင် မညစ်စေနဲ့ ။ စစ်ကျွန်ဘ၀လွှတ်မြောက်ကြဖို့တော်လှန်ှရေးသို့့ အသင့်ပြင်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အာဖရိက လူထု တိုက်ပွဲ တွေ ကို အတုယူကြဖို့အသိပေးပါတယ်။ သန်းေ၇ွှ ကတော့ သိန်းစိန် ကို စင်ပေါ်တင်ပြီး ပုန်းကွယ် နေပါတယ်။ ဗမာပြည်ဘယ်လဲ ဘာလဲ။ ဤ သတင်းဖိုင် ကတော့ ဂဒါဖီ ပစ်မသတ်မှီ အချိန် မှာ ရိုက်ကူးထားတဲ့ဖိုင်ပါ။
UPDATE 8.40am: MUAMMAR Gaddafi, the "king of kings of Africa" who for eight months refused to surrender, was captured inasewage pipe wavingagolden gun near his hometown Sirte, Libyan fighters said.
"Gaddafi was inajeep when rebels opened fire on it. He got out and tried to flee, taking shelter inasewage pipe," National Transitional Council (NTC) field commander Mohammed Leith told AFP.
NTC fighters "opened fire again and he came out carryingaKalashnikov (assault rifle) in one hand andapistol in the other."
But according to interim prime minister Mahmud Jibril, Gaddafi was shot in the head "in crossfire" between his supporters and new regime fighters after his capture.
Outside the hospital in Sirte, the Mediterranean city where Gaddafi diehards for weeks put upalast stand againstarevolt which broke out in mid-February,ayoung fighter proudly brandished what he said was the strongman's golden gun.
Mohammed Shaban, who said he took part in Gaddafi's capture, said the 69-year-old who ruled Libya for four decades had been cornered in the sewage pipe. "His blood is on my shirt. I'll never wash it," he said.
A fugitive since the NTC forces with NATO air support swept into Tripoli at the end of August, Gaddafi's whereabouts had remainedamystery.
A wounded Gaddafi was seen alive and standing as he was being manhandled by Libya's new regime fighters before the announcement of his death, inavideotape aired on Arab satellite channels.
Bloodied in the head, face and shoulders, NTC fighters circled Gaddafi, who was hailed as the country's "king of kings" by African tribal chiefs in 2009, as he apparently tried to cry out.
One fighter appeared to holdagun to his head but it was unclear if he fired before Gaddafi was hauled onto the front ofavehicle, amid chaotic scenes in the video broadcast on Al-Arabiya and Al-Jazeera television channels.
"We announce to the world that Gaddafi has died in the custody of the revolution," NTC spokesman Abdel Hafez Ghoga announced earlier.
In France, Defence Minister Gerard Longuet said French warplanes firedawarning shot to stopaconvoy of up to 80 vehicles carrying Gaddafi before he was captured.
The minister saidaFrench Mirage-2000 was "informed by the integrated general staff (of NATO) of the need for an intervention to prevent this column from advancing.
"A French warning shot was fired to prevent the column from proceeding and it divided," he said, after which some of the vehicles were confronted by the NTC fighters.
"In these clashes, vehicles were destroyed, people were wounded and killed and it was among them that... Gaddafi wasapart," he said.
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 7:39 AM0comments
မုန်တိုင်း သတိပေးမူ စစ်ဘက် အတွက် ပြုလုပ်၊ အရပ်ဘက် အတွက် မပါဝင်
မောင်အေး News Date:10/19/2011 နိရဉ္ဇရာ သတင်းဌာန(ပေးပို့ သူ - ဗမာ့သွေး )
အစိုးရ အာဏာပိုင်များက ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်း တလျှောက်ရှိ စစ်စခန်းများနှင့် ရေတပ်စခန်းများအတွက် မုန်တိုင်း သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်ထားသော်လည်း အရပ်ဘက်အတွက် ထုတ်ပြန်ထားခြင်း တစ်စုံတရာ မရှိကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာ အစိုးရ အာဏာပိုင်များက ယမန်နေ့ညနေ ၄ နာရီခန့်က စတင်ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ် ကမ်းရိုးတန်းတလျှောက်ရှိ စစ်စခန်းများနှင့် ရေတပ်စခန်းများကို မုန်းတိုင်းသတိပေးညွန်းကြားချက် ထုတ်ပြန်ထားခဲ့သော်လည်း အရပ်ဘက်ဆိုင်ရာကို တစုံတရာ ထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးကြောင်း ဒေသအတွင်းကလာသော သတင်များက ပြောသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့နယ် ပြည်သူ့ လွှတ်တော် အမတ် ဦးအောင်မြကျော်က "စစ်တွေမှာ မိုးတော့ ရွာနေတယ်။ မနေ့က လေပြင်း တိုက်ခတ်တာတွေ တော့ ရှိပါတယ်။ အခုအချိန်ထိတော့ မုန်တိုင်း သတိပေးထားတာတော့ မရှိသေးဘူး" ဟု ပြောသည်။
တခြား လူငယ် တစ်ဦးကလည်း " မိုးတော့ ရွာနေပါတယ်။ မုန်တိုင်းတိုက်မယ့် သတင်းတော့ မရသေးပါဘူး။ အစိုးရက သတင်းထုတ်ပြန်တာတွေလည်း စစ်တွေ မရှိသေးဘူး။ ဂီရိတုန်းကတော့ မုန်းတိုင်း မတိုက်မှီ အသံချဲ့စက်နဲ့ အော်ပါတယ်။ ခုတော့ မရှိသေးပါဘူး" ဟု ပြောသည်။
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသည့် မုန်တိုင်းကြောင်း ရခိုင်ပြည်နယ် ပေါက်တော၊ စစ်တွေနှင့် မင်းပြားမြို့နယ်များတွင် မိုးသက် လေပြင်းများ ယနေ့နံနက်မှ စတင်ကျရောက်နေပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
မိုးလေ၀ါသ ဇလဗေဒ အငြိမ်းစား ဦးထွန်းလွင်က မုန်းတိုင်း အခြေအနေကို ယခုလို ပြောသည်။
" မုန်တိုင်းက ဒီနေ့ ညနေပိုင်းကနေ နောက်နေ့ မနက်အတွင်း ဖြတ်သန်းနိုင်ပါတယ်။ အခု အချိန်ထိတော့ မုန်တိုင်းငယ် အဆင့်မှာဘဲ ရှိပါသေးတယ်။ တစ်နာရီ မိုင် (၄၅) နုန်းပေါ့။ တခါတလေ တနာရီ ၅၀ လာက်တိုက် ခတ်နိုင်ပါတယ်။ အဓိကတော့ ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းနဲ့ ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ကို ဖြတ်သန်းနိုင်ပါတယ်။ ပင်လယ်ပြင်မှာ လိုင်းကြီးနိုင်တယ်။ ရေတော့ မတက်နိုင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီထက် အားကောင်း လာရင်တော့ အခြေအနေ ဆိုးနိုင်ပါတယ်။ ဒီနေ့ တစ်နေ့လုံး ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာ Update သတိထား စောင့်ကြည့်ဖို့ လိုပါတယ်" ဟု ပြောသည်။
ယခု မုန်တိုင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံဘက်သို့ ရွှေ့လျားလာသဖြင့် လောလောဆယ်တွင် ပင်လယ်ပြင်ကို မထွက်ရန်နှင့် ကုန်းပေါ်တွင်နေထိုင်ကြရန် လိုကြောင်း ဦးထွန်းလွှင်က ပြောသည်။
" သိသိသာသာကို မြန်ဘက်ကို ကပ်လာတယ်။ အရင်ကတော့ မုန်တိုင်းက လောင်ဒီကျူဒ် ၈၉ ကနေ ခု လောင်ဒီကျူဒ် ၉၈ ထိ ရောက်လာပြီးတော့ အရှေ့ဘက်ကို ရွှေ့လာတယ်။ အားလုံး ယေဘူယျ ပြောရင် ရခိုင်မြောက်နဲ့ ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ အစပ်ပေါ့။ အတိအကျ ပြောရင် ကျွန်တော်တို့ဘက်က မောင်တော၊ သူတို့ဘက်ကတော့ ကော့ဘဇားပေါ့။ အဲဒီနေရာက မုန်းတိုင်း ဗဟိုချက် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်" ဟု သူက ပြောသည်။
မိုးလေ၀ါသ ဇလဗေဒ အငြိမ်းစား ဦးထွန်းလွင် အင်တာနက် ဆိုက်တွင်လည်း ဘင်္ဂလားပင်လယ်တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသည့် မုန်တိုင်းမှာ ၂၄ နာရီအတွင်း ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းနှင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျနိုင်ငံ တောင်ပိုင်းကို ဖြတ်ကျော်မည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 7:33 AM0comments
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 7:32 AM0comments
Thursday, October 20, 2011 Kachinlandnews(ပေးပို့ သူ - ဗမာ့သွေး )
ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း၊ ကလောအခြေစိုက် တပ်ရင်း ၅၅ လက်အောက်ခံ၊ တီကျစ်အခြေစိုက် ခမရ ၅၁၂ သည် မန္တလေး – မူဆယ်လမ်းပေါ်ရှိ မူဆယ်မြို့နယ်၊ နမ်အွမ် ကျေးရွာတွင် အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ၀င်ရောက် ဓါးပြ တိုက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်နေ့ တွင် ဗိုလ်မှူးစိုးကျော်သူ ဦးဆောင်သည့် မြန်မာအစိုးရ စစ်တပ်မှ စစ်သားများသည် ညနေ ငါးနာရီ လေးဆယ့်ငါးမိနစ်အချိန်တွင် နမ်အွမ် ကျေးရွာမှ မုဆိုးမဖြစ်သူ နန်းခမ်း ၏ အိမ်ကို ဓါးပြ တိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။-
ဒေါ်နန်းခမ်း ပြောင်းဖူးခင်းသို့ သွားနေချိန်တွင် အိမ်တွင်ကျန်ခဲ့သည့် သားငယ်ဖြစ်သူ မောင်မာတူး အသက် ၁၂ နှစ်ကို ဓါးမနှင့်ရွယ်ကာ ငွေရှိသည့် နေရာကို ပြသခိုင်းခဲ့သည်။
ထို့နောက် ပိုက်ဆံထည့်ထားသည့် သေတ္တာကို ဖျက်ပြီး သိမ်းဆည်းထားသည့် ငွေကျပ် ၁၀ သိန်းကို ထုတ်ယူသွားကြောင်း သိရသည်။
ဗုဒ္ဓဟူးေ့၊ အောက်တိုဘာလ 19 ရက် 2011 ခုနှစ် ကချင်သတင်းဌာန(ပေးပို့ သူ - ဗမာ့သွေး )
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 7:31 AM0comments
အစိုးရသစ်လက်ထက် သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုများလာ
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ အောက်တိုဘာလ 19 ရက် 2011 ခုနှစ် စောခါးစူးညား သတင်း - ကေအိုင်စီ(ပေးပို့ သူ - ဗမာ့သွေး )
မြန်မာအစိုးရသစ် တက်လာပြီးနောက် သျှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်းရှိ မန်တုံ၊ ကွတ်ခိုင်နှင့် နမ့်ခမ်း မြို့နယ် ၃ခုအတွင်း၌ ဘိန်းစိုက်ပျိုး မှု များလာသည်ဟု ပလောင်(တအာင်း)အမျိုးသမီး အစည်းအရုံး-PWO က ပြောသည်။
PWO ၏ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး လွေးနွေနှောင်းက “အဲဒီဒေသ (မန်တုံ၊ ကွတ်ခိုင်၊ နမ့်ခမ်း)မှာဘိန်းစိုက် ပျိုးမှုကတော့ အရင်က ဘိန်းမစိုက်တဲ့ ရွာငယ်လေးတွေတောင် ဘိန်းစိုက်လာကြတယ်။”ဟု ပြောဆိုသည်။
ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုတွင် ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် မည်မျှတိုးပွားလာသည်ကို အတိအကျ မသိနိုင်သော်လည်းမန်တုံမြို့ နယ်တွင် ယခင်က ဘိန်းစိုက်ပျိုးသည့် ရွာ ၇၀ကျော်မှ ယခုဆိုလျှင် ရွာပေါင်း ၈၀ထက်မနည်းများပြားလာ ကြောင်းလည်း သူမက ဆက်၍ ပြောဆို သည်။
စစ်အစိုးရလက်ထက် ပြီးခဲ့သည့် ၂နှစ်က မြန်မာနိုင်ငံ၌ ၂၀၁၅ခုနှစ်တွင် ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှု လုံးဝပပျောက်သွား အောင် ကြိုးပမ်း မည်ဟု ပြောဆိုခဲ့သော်လည်း ယခုနှစ်တွင် ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှု ပိုမို တိုးပွားလာခဲ့သည်။
ယင်းသို့ ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှု တိုးလာရခြင်းမှာ ထိုနယ်မြေတွင် ကချင်စစ်တပ်၊ သျှမ်းစစ်တပ်နှင့် အစိုးရစစ်တပ် တို့အကြား တိုက်ပွဲဖြစ် ပွားပြီး ဒေသခံ အစိုးရအာဏာပိုင်များ လူထုများအပေါ် အာရုံမစိုက်နိုင်ခြင်း၊အစိုးရ အာဏာပိုင်ကိုယ်တိုင် ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုတွင် ပါ ၀င်ပတ်သက်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်ဟု PWO ကမှတ်ချက်ပေးထား သည်။
“ဘိန်းစိုက်ချိန်မှာ အာဏာပိုင်ကိုယ်တိုင်က လာဘ်ပေးလာဘ်ယူရှိတယ်။ နမ့်ခမ်းနဲ့ ကွတ်ခိုင် နယ်တ၀ိုက် မှာဆိုရင် အရင်တုန်း က ပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင်က အခုဆို လွှတ်တော်ထဲမှာ အကုန်ပါတဲ့သူတွေဖြစ်နေ တယ်။ ဘိန်းစိုက်ရာသီဆိုရင် ဘိန်းမစိုက်ရ ဘူးလို့ ပြောပေမယ့် ပိုက်ဆံပေးလိုက်ရင်စိုက်ခွင့်ပြု တာပဲ။”ဟု လွေးနွေနှောင်းက ရှင်းပြသည်။
အထူးသဖြင့် ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်ရှိ ပြည်နယ်လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်(၂) မှ ဦးမြင့်လွင် (ခ) ဦးဝမ်ကွယ်တာနှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဦးတီခွန်မြတ်တို့ နေထိုင်ရာဒေသတွင် ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုများ ပိုမိုများပြားလာသည်ဟု PWO က ထောက်ပြသည်။
အဆိုပါဒေသရှိ ဘိန်းစိုက်ပျိုးသူ ရွာသူရွာသားအချို့မှာ စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲကြောင့် ၀င်ငွေပိုရရန် စိုက်ပျိုးခြင်းဖြစ်ပြီး အချို့မှာ စီးပွားဖြစ် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအနေဖြင့် စိုက်ပျိုးခြင်းဖြစ်သည်။
“နမ့်ခမ်းက လူတွေလည်း စိုက်မှစိုက်။ ဘိန်းစိုက်တာကတော့ လွတ်လပ်ရေးရသလိုပဲ။ စားဝတ်နေရေး အတွက် တရုတ်ပြည်မှာ အလုပ်သွားလုပ်စရာ မလိုတော့ဘူး။”ဟု နမ့်ခမ်းမြို့နယ်ရှိ ရွာသားတဦးကို ကိုးကား၍ PWO က ပြောသည်။
ဘိန်းများကို ယခုနှစ် ဩဂုတ်လ စတင်စိုက်ပျိုးခဲ့ပြီး လာမည့်နှစ် ဖေဖော်ဝါရီ၊ မတ်နှင့် ဧပြီလတို့၌ စတင်၍ အစေးခြစ်ယူကြ သည်။ ထိုမှရလာသည့် ဘိန်းစိမ်းများကို မြန်မာနိုင်ငံတ၀ှမ်းနှင့် တရုတ်နယ်စပ်ဘက်သို့ သွားရောက်ရောင်းချလေ့ရှိပြီး ပြီးခဲ့ သည့် ၂နှစ်အတွင်း ဘိန်းစိမ်းတစ်ပိဿာလျှင် ငွေကျပ် ၈သိန်းမှ ၁၃သိန်းအထိ ဈေးပေါက်သည်ဟု PWO က ဆိုသည်။
PWO သည် လက်ရှိ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်တွင် အခြေစိုက်ပြီး ၂၀၁၀ခုနှစ်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ ဘိန်းစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ပတ် သက်၍ “အဆိပ်သင့်ပန်းများ”နှင့် “အဆိပ်သင့်တောင်တန်းများ”အမည်ရှိ အစီရင်ခံစာ နှစ်အုပ်ကို ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 7:29 AM0comments
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 7:28 AM0comments
သမ္မတ အနေနဲ့နောက်ထပ် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ထုတ်ပြန်ဖို့ရှိ
ကုလသမဂ္ဂရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ ကင်တားနားရဲ့ အခုတစ်ကြိမ် အစီရင်ခံစာဟာ အရင်ကထက် ပိုပြီး အပြုသဘော ဆောင်လာတယ်လို့ မြန်မာ အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်က မနေ့က ကုလသမဂ္ဂမှာ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
လက်ရှိ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အခြေအနေဟာ ခေတ်သစ်ကို ရောက်နေပြီလို့ မြန်မာ ကိုယ်စားလှယ်က ဆိုပါတယ်။ ကျင်းပနေတဲ့ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကနေ ခေတ်မမီတော့တဲ့ ဥပဒေတွေကို ပြောင်းလဲ ပြင်ဆင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်း ပြောသွားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နိုင်ငံတော် သမ္မတ အနေနဲ့ လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာခွင့်ကို ခြောက်လ အတွင်း နှစ်ကြိမ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်း ပြောဆိုပါတယ်။
ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြဌာန်းချက် အရ နောက်ထပ်လည်း လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာခွင့် ထုတ်ပြန်ဖို့ ရှိတယ်၊ သမ္မတမှာ လုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိတယ်လို့ မြန်မာ ကိုယ်စားလှယ်က ပြောသွားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မြန်မာ နိုင်ငံက ပြောင်းလဲနေတဲ့ အခြေအနေတွေ အပေါ် ကုလသမဂ္ဂ အပါအ၀င် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်း အနေနဲ့ အကောင်းမြင်ဖို့ မြန်မာ ကိုယ်စားလှယ်က တိုက်တွန်းသွားပါတယ်။Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 7:27 AM0comments
မြစ်ဆုံဆည် စီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းတဲ့ အပေါ် ကုလကိုယ်စားလှယ် ကြိုဆိုချက် တရုတ် မကျေနပ်
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး အထူး ကိုယ်စားလှယ် Tomas Ojea Quintana ရဲ့ အစီရင်ခံစာမှာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က တရုတ်နဲ့ ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ မြစ်ဆုံဆည် စီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းထားလိုက်တာဟာ ပြည်သူ အများဆန္ဒကို နားထောင်တာဖြစ်လို့ ကြိုဆိုတဲ့ အကြောင်း ဖေါ်ပြခဲ့တဲ့ အပေါ် တရုတ် ကိုယ်စားလှယ်က ကန့်ကွက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
"တရုတ် အစိုးရ အနေနဲ့ မမှန်ကန်တဲ့ အချက်အလက်ပေါ်မှာ မကျေနပ်ဘူးဆိုတာ ပြောချင်ပါတယ်။ တရုတ်ပြည် အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ အပါအ၀င် အခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ ဖက်စပ် လုပ်ကိုင်နေတဲ့ တရုတ် ကုမ္ပဏီတွေကို အစဉ်တစိုက် ပံ့ပိုး အကာအကွယ် ပေးနေပါတယ်။ ဒီမြစ်ဆုံဆည် စီမံကိန်းဟာ မြန်မာ ပြည်သူတွေ အတွက် အကျိူးရှိစေ ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဒီစံမံကိန်း အတွက် အပြန်အလှန် လေ့လာ သုံးသပ်ပြီးမှ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေ ကတည်းက စတင် အကောင်အထည် ဖေါ်ခဲ့တာပါ။ တရုတ်နဲ့ မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံ အကျိူးစီးပွား အတွက် အခြားနေရာတွေမှာ ဆက်ပြီး ပူးပေါင်း ဖက်စပ် ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်" လို့ တရုတ် ကိုယ်စားလှယ်က ပြောသွားတာပါ။ တရုတ် အစိုးရအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက အပြောင်းအလဲတွေကို သိသာ ထင်ရှားတဲ့ ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုတွေ အဖြစ် ကြိုဆိုကြောင်းလည်း တရုတ် ကိုယ်စားလှယ်က ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 7:26 AM0comments
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 7:24 AM0comments
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 7:23 AM0comments
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 7:22 AM0comments
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 1:11 AM0comments
(ပေးပို့ သူ- အိမ်မက်မဟုတ်ပါ)
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် ထဲမှာ မုန်တိုင်ဖြစ်နိုင်ခြေ ပိုများလာပြီလို့ ထင်ပါတယ်။ပုံမှာ တိမ်တွေ ပိုစုလာသလို မုန်တိုင်အင်္ဂါရပ်တွေ ပိုပြီပြင်လာပါတယ် စောင့်ကြည့်ဖို့ ပိုပြီး လိုပါပြီ ထင်ပါတယ်။
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 3:05 AM0comments
ကျနော် သေသေချာချာ နဲ့ လေးလေးစားစား ခေါ်ပါရစေ
ဟုတ်ကဲ့ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မင်းအောင်လှိုင်ခင်ဗျား
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် နေရာကို ဘယ်သူပေးလို့ ရောက်လာတာပါလဲ
ကိုယ်ပိုင် အရည်အချင်းကြောင့် ရောက်လာတာလား ၊ လက်ညှိုးထောင် ခေါင်းညှိမ့်
ကျွမ်းလို့ ရောက်လာတာလား ၊
ဟုတ်ကဲ့ တဆိတ်လောက် မေးခွန်းလေးတွေ ထပ်မေးပါရစေ
ဘယ်သူလို့ပြောရင် တစ်ယောက်ထဲ ဖြစ်မှာစိုးလို့ ဘယ်သူတွေ မွေးဖွားခဲ့တာပါလဲ
တပ်မတော်က တပ်မတော်ကို မွေးဖွားခဲ့တာလား ( ဂျပန်ဖက်ဆစ် စစ်တပ်က
ပြည်သူကို ကောင်းစားစေချင်တဲ့ ခေတ်ပညာတတ် လူငယ် ကျောင်းသား တွေက
မွေးဖွားခဲ့တာလား (သခင် အောင်ဆန်း စသည်ဖြင့်ပေါ့)
ဒါကို ပထမ ဦးဆုံး သေသေချာချာ နားလည်ရပါမယ် ကာချုပ်ကြီးရယ်
တပ်မတော် စတင် သန္ဓေတည် မွေးဖွားခြင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ပေါ့
ကြာခဲ့ပြီ ဆိုတော့လည်း ဘယ်လိုပြောရမလဲ ရည်ရွယ်ချက်တွေက တိုးတက်သွားတာလား
ပြောင်းလဲသွားတာလား အရင်အတိုင်းပဲလား မေးရတာပေါ့
တပ်မတော် စပြီးဖွဲ့ ကတည်းက အခုချိန်အထိ တပ်မတော်ကို ထမင်းကျွေးနေတာ ဘယ်သူတွေလဲ
ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးလား ၊ ၀န်ကြီးချုပ်လား ၊ သမ္မတ လား ၊ ပြည်သူပြည်သား
စစ်သားဆိုတာ အောက်ဆိုဒ်ဝင်ငွေ ရှိကြတဲ့သူတွေ မဟုတ်ကြလေတော့
(စစ်ဗိုလ်တွေလည်း အောက်ဆိုဒ်ရှိပုံ မရကြပါဘူး)
ထမင်းကျွေးရုံတင်မကပါဘူး ၊ အ၀တ်အစားဆင် ၊ နေစရာနေရာ ပေးထားတာလည်း ဘယ်သူတွေပါလည်း
ညဘက် ဘုရားရှိခိုးအပြီး မေတ္တာပို့တဲ့အခါ ထမင်းရှင်အစစ် နဲ့ အတု လွဲနေမှာ
စိုးလို့ပါ (စစ်ဗိုလ်တွေ ည မအိပ်ခင် ဘုရားရှိခိုးတယ်လို့ ထင်လိုပါဗျာ)
ကျနော်တို့ ဗမာပြေက ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံးမှာ နံပါတ်ဘယ်လောက်ချိတ်ပါသလဲ အဲလေ
ယောင်လို့ ကမ္ဘာ့ အဆင်းရဲဆုံးမှာ နံပါတ် ဘယ်လောက်ချိတ်ပါသလဲ
လွတ်လပ်ရေးရကာစ ဗမာပြေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံတွေ နှိုင်းယှဉ်ချက် နဲ့
လက်ရှိ ဒီကနေ့ ဗမာပြေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံတွေ နှိုင်းယှဉ်ချက် ဘယ်လိုများ
အခု ဒီလိုဖြစ်ရတာ ဗမာတွေ အသုံးမကျလို့လား ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့သူ
ညံ့လို့လား ကံတရားကြောင့်လား (ကံကြောင့်လားဆိုတာ ဘုန်းဘုန်းတွေကို
နောက်ပြီး ခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့နေရာက အရည်အချင်းနဲ့ ရောက်ရတာလား အတင်းလုယူရတာလား
ဒါမှမဟုတ် တယောက်ယောက်က ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ နဲ့ (ငါ ငါ့မိန်းမ
ငါ့ဆွေမျိုးတွေနဲ့ ငါ့စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကို ငါ့မြေးတစ်သက်
စောင့်ရှောက်စေသတည်း ဆိုတာနဲ့) ဒီနေရာကိုပေးခဲ့တာလား
စဉ်းစားပါ သေသေချာချာစဉ်းစားပါ ကာချုပ်ကြီးရယ်
အသိဥာဏ်မရှိတဲ့သူတွေ လက်ခုပ်တီးပြီးပေးနေတာက အယောင်ဆောင်သူရဲကောင်းဆိုတဲ့ဆုပါ
ပညာရှိတွေ ပြည်သူပြည်သားတွေ က သစ္စာဖောက်လို့ ရာဇ၀င်မှာ စာအတင်မခံချင်စမ်းပါနဲ့
အခု ဘာကြောင့် တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း စစ်တိုက်နေရတာလဲ
ဘယ်သူခိုင်းလို့လဲ ဘယ်သူကမြှောက်ပေးနေလို့လဲ ဘယ်သူ့အကျိုးစီးပွားအတွက်လဲ
အန်တီဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်တို့
သူတို့ ဆွေးနွေးနေကြတာဟာ အာဏာခွဲယူဖို့ မဟုတ်သလို
ကာချုပ်ကြီးကို ရာထူးက ချ ပြီး နောက် ကာချုပ်တစ်ယောက် အစားထိုးဖို့ လည်း မဟုတ်ပါဘူး
မကြာခင် ဒီပွဲမှာ ကာချုပ်ကြီးက တတိယ နေရာကနေ အရေးပါလာမယ့်သူတစ်ယောက်ပါ
ဟုတ်ပါတယ် အန်တီဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်တို့
ပြီးရင် ကာချုပ်ကြီးက တတိယနေရာက အရေးပါလာမှာပါ
အဲဒီအချီန်မှာ ကာချုပ်ကြီးလက်က ကိုယ့်ညီအစ်ကိုတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့
ဒီလိုစစ်တိုက်နေတာဟာ ကာချုပ်ကြီး လက်စွမ်းပြနေတာလား ချောက်ထဲကိုခုန်ချနေတာလားလို့
တောင်းပန်ပါတယ် ချောက်ထဲကိုခုန်မချပါနဲ့ ကာချုပ်ကြီးရယ်Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 3:03 AM0comments
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 3:01 AM0comments
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 2:54 AM0comments
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 2:53 AM0comments
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 2:52 AM0comments
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 2:50 AM0comments
ယူရိုဇုန် အတွင်း ကြုံတွေ့ နေရတဲ့ အကြွေး ပြဿနာ တွေကို ဖြေရှင်း နိုင်ဖို့ အတွက် ပြင်သစ် နိုင်ငံ က ပါရီ မြို့မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဂျီ ၂၀ နိုင်ငံ တွေက ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီး တွေ ရဲ့ အစည်းအဝေး ကြီး ပြီးဆုံး ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့တွေက ဥရောပ ခေါင်းဆောင် တွေဟာ ဒီ ပြဿနာတွေ ကို ဖြေရှင်း နိုင်ရေး အတွက် နီးစပ် လာနေပြီ ဖြစ်တယ်လို့ ယုံကြည် ကြောင်း ပြော ပါတယ်။
ဗြိတိသျှ ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီး ဂျော့ခ်ျ အော့စဘုန်း က ဒီ အစည်းအဝေး မှာ ဆွေးနွေးမှုတွေ တော်တော်ကို အရှိန် ရခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အမေရိကန် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီး တင်မိုသီ ဂိုက်တနာက ဒီ အခုရှိနေတဲ့ အစီအစဉ် သစ် တွေ နဲ့ပတ်သက် လို့ တော်တော် အားရ စရာ ကောင်းတာ တွေ ရှိတယ်လို့ သူ ကြားထား ကြောင်း ဆိုပေမယ့် အသေးစိတ် ကို မသိသေးလို့ စောင့်ကြည့် ဦးမှာ ဖြစ်ကြောင်း ဆိုပါတယ်။
ပြင်သစ် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီး ဖရန်ဆွာ ဘာအိုရင်က တော့ ဒီအသေးစိတ် အစီအစဉ် တွေကို လာမဲ့ သတင်းပတ် ကုန်ပိုင်း ဘရပ်ဆယ်လ် မြို့မှာ ပြုလုပ်မဲ့ အီးယူ ခေါင်းဆောင် တွေရဲ့ အစည်းအဝေးမှာ တင်ပြ သွား မှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီ အစီ အမံ တွေထဲမှာ ဥရောပ ဘဏ်လုပ်ငန်း တွေ ကို အားဖြည့် ပေးဖို့၊ ဂရိ နိုင်ငံရဲ့ ကြွေးမြီ ပမာဏ ကို လျှော့ချ ပစ်ဖို့ နဲ့ ယူရို ငွေကြေး သုံးစွဲတဲ့ ဇုန်အတွင်း မှာ အကူရန်ပုံငွေ အင်အား တိုးမြှင့် ဖို့ တွေ ပါဝင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။Rest of your post
ပိတ်ဆို့အရေးယူမှု ရုတ်သိမ်းပေးရေး EU အဖွဲ့ကို ၁ဝ ပါတီတိုက်တွန်း
2011-10-16 RFA(ပေးပို့ သူ - ဗမာ့သွေး )
EU ဥရောပသမဂ္ဂ နိုင်ငံအစိုးရတွေအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ပိတ်ဆို့ အရေးယူမှုတွေကို ရုတ်သိမ်းပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံစာကို ရွေးကောက်ပွဲဝင် နိုင်ငံရေးပါတီ ၁ဝ ပါတီအဖွဲ့က ဒီကနေ့ ဥရောပသမဂ္ဂကို ပေးပို့လိုက်ပါတယ်။
ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ- မြန်မာပြည် ရုံးခန်းမှာ မဟာမိတ်ပါတီ ၁ဝ ပါတီ ဒီကနေ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြပြီး သဘောတူ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာ ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အစိုးရက ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်ဆောင်နေပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် EU ဥရောပသမဂ္ဂ နိုင်ငံအစိုးရတွေ အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေအပေါ် ပြန်လည်စဉ်းစား သုံးသပ်ပေးဖို့ တိုက်တွန်း တောင်းဆိုရတာဖြစ်ကြောင်း ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ- မြန်မာပြည်ရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသုဝေက ပြောပါတယ်။
“ကျနော်တို့ အရင်တုန်းက EU နဲ့ အကြိမ်ကြိမ်တွေ့ခဲ့တုန်းက ပြောခဲ့ဆိုခဲ့တာတွေ ရှိတယ်။ အခုလည်းပဲ ပြောစရာလေး ရှိလို့ ဆက်ပြောမယ် ဆိုပြီးတော့။ အဲဒါက ဘာလဲဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အစိုးရကလည်းပဲ အပြောင်းအလဲတွေ လုပ်လာတယ်ပေါ့နော်။ လုပ်လာတော့ အဲဒါ EU ဘက်ကလည်း ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်အတွက်ကို၊ လူထုကို ထိခိုက်စေတဲ့ အဲဒီ Sanction ဆိုတာလေးကို ရုတ်သိမ်းပေးဖို့ ပြန်ပြီးတော့ စဉ်းစားပါ ဆိုပြီး ကျနော်တို့ တိုက်တွန်းတာပါ”
ဥရောပသမဂ္ဂက မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ချမှတ်ထားတဲ့ ကန့်သတ် ပိတ်ဆို့မှုတွေကို ရုပ်သိမ်းပေးဖို့ ရွေးကောက်ပွဲဝင် ပါတီ ၁ဝ ပါတီက ပန်ကြားချက်တွေ အရင်ကလည်း ပေးပို့ခဲ့ဖူးကြောင်း သိရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့လကတော့ အမေရိကန်၊ အီးယူ၊ ကနေဒါ စတဲ့ ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေ အနေနဲ့ ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ ကုန်သွယ်ရေးမှာ GSP အစီအစဉ်အရ အခွန်လျှော့ပေးတဲ့ အထွေထွေဦးစားပေး အခွင့်အရေးတွေကို မြန်မာနိုင်ငံကို ပေးအပ်ဖို့ မသင့်လျော်သေးကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အလုပ်သမားသမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ် FTUBက ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 2:49 AM0comments
နယူးယောက်ကစတဲ့ Occupy လှုပ်ရှားမှု ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေကို ပျံ့နှံ့
Occupy Wall Street လို့ခေါ်တဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နယူးယောက်မြို့ကနေ စတင်ခဲ့တဲ့ စီးပွားရေး မညီမျှမှုကို တောင်းဆိုတဲ့ ဆန္ဒပြမှုဟာ နိုင်ငံတကာအထိပါ ဂယက်ရိုက်ခတ်မှုတွေ ရှိလာနေပါပြီ။ အီတလီနိုင်ငံ ရောမမြို့မှာ မနေ့တုန်းက ရာနဲ့ချီတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေ ရောမမြို့ရဲ့လမ်းမတွေပေါ်မှာ ပြည့်နေခဲ့ကြပြီး အဲဒီအထဲက တချို့ဟာ အဆောက်အဦးတွေမှာရှိတဲ့ ပြတင်းပေါက်တွေကို ရိုက်ခွဲတာတွေနဲ့ မီးရှို့တာတွေ လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ရောမမြို့မှာ ရဲအင်အားကလည်း ကြီးကြီးမားမား ချထားပါတယ်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံ လန်ဒန်မြို့မှာလည်း ဆန္ဒပြသူတွေနဲ့ ရဲတွေအကြား ရုန်းရင်းဆန်ခတ် ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီမှာလည်း ရာနဲ့ချီတဲ့ ဆန္ဒပြသူတွေဟာ စိန့်ပေါလ် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းနားမှာ လာပြီးစုရုန်းခဲ့ကြပါတယ်။ ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာ သြစတေးလျ၊ နယူးဇီလန်၊ စပိန်၊ ဂျာမနီနဲ့ ပြင်သစ်နိုင်ငံတွေမှာပါ ဖြစ်ပွားနေတာပါ။
ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာ G-20 လို့ခေါ်တဲ့ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး အင်အားကြီးနိုင်ငံ၂၀ ရဲ့ အစည်းအဝေးကို ကျင်းပနေတာပါ။ အဲဒီမှာ အဓိကဆွေးနွေးနေတာကလည်း ဥရောပက စီးပွားရေး အကျပ်အတည်းကိစ္စပါပဲ။ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုမှာလည်း မြို့တော်ဝါရှင်တန်ဒီစီနဲ့ နယူးယောက်မြို့ အပါအ၀င် တခြားစီးပွားရေး အချက်အခြာကျတဲ့ မြို့ကြီးတွေမှာ ဆန္ဒပြပွဲတွေ ဆက်ပြီးဖြစ်ပွားနေတုန်းပါပဲ။
၀ါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်မှာ ဆန္ဒပြသူအင်အား ၅၀၀လောက်က မြို့တွင်းကို လှည့်ပြီးဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ ဆန္ဒပြသူတွေ မကျေမနပ်ဖြစ်နေတာက ဆင်းရဲသူနဲ့ ချမ်းသာသူတွေအကြား မညီမမျှ ဖြစ်လွန်းနေတဲ့ အချက်ကိုပါပဲ။ ဆန္ဒပြသူတွေက သူတို့ကိုယ်သူတို့ ၉၉ ရာခိုင်နှုန်းလို့ ခေါ်ကြပါတယ်။ ကျန်တဲ့ ၁ ရာခိုင်နှုန်းက ကမ္ဘာ့လူချမ်းသာတွေလို့ ပြောနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 7:50 AM0comments
ကျန်ရှိနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေး စာရေးသားဖြန့်ဝေလှုပ်ရှား
October 15th, 2011 | စာရေးသူ - ဘုန်းခိုင် သတင်း ရိုးမ3(ပေးပို့ သူ - ဗမာ့သွေး )
မြန်မာနိုင်ငံတွင်းရှိ အကျဉ်းထောင်များတွင် ကျန်ရှိနေသေးသည့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ အမြန်ဆုံးပြန်လွှတ် ပေးဖို့ ရေးသားထားသည့် စာရွက်များ ဖြန့်ဝေခြင်း လှုပ်ရှားမှုများ ယမန်နေ့မှစ၍ ယနေ့ မနက်ပိုင်းအထိ နှစ်ရက်ဆက်တိုက် ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသားခွင့်အမိန့်ဖြင့် အောက်တိုဘာလ (၁၂) ရက်၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့တွင် အကျဉ်းသား ၆ ထောင်ကျော် လွှတ်ပေးခဲ့သည်။ ထိုအကျဉ်းသားများထဲတွင် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၂၀၀ ခန့်သာ ပါဝင်ခဲ့သည့်အပေါ် မကြေနပ်သည့် လူငယ်များက ကျန်ရှိနေသေးသော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ပြန်လွှတ်ပေးရေးအတွက် စာရွက်များ ဖြန့်ဝေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ အမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးရန် တောင်းဆိုသည့် စာရွက်များ ရန်ကုန်မြို့တွင်း ဖြန့်ဝေနေခြင်းနှင့်ပတ်သတ်၍ စာရွက်ရခဲ့သည့် ရန်ကုန်မြို့ခံတဦးက “ ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းက တောင်ဒဂုံသွားတဲ့ ဘက်စ်ကားတွေနဲ့ သင်္ကန်းကျွန်းဘက်သွားတဲ့ ဘက်စ်ကားတွေပေါ်မှာ ဝေတယ်။ အများဆုံးဝေသွားတာတော့ အင်းယားဘက်မှာ။ နောက်ပြီးတော့ သိမ်းကြီးဈေးထဲမှာရော သိမ်းကြီးဈေးအရှေ့ ကားတွေပေါ်မှာပါ တက်ဝေတာ တွေ့ တယ်။ ဝေတဲ့စာရွက်ကတော့ အေးဖိုး(A4)ခေါက်ချိုးစာရွက်အရွယ်ပေါ့။ အဲဒီမှာ ကျန်ရှိနေတဲ့ အကျဉ်းသားနဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ အမြန်ဆုံး လွှတ်ပေးရန်တောင်းဆိုသည်လို့ စာပါတယ်။ အောက်ကမှ ခွပ်ဒေါင်းငယ်ဆိုပြီး လက်မှတ်ထိုးထားတာ တွေ့တယ်” ဟုပြောသည်။
အလားတူ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ အမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုသည့် စာရွက်များ ယမန်နေ့က နေ့လယ်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန် သိမ်းကြီးဈေးတ၀ိုက် ဖြန့်ဝေလှုပ်ရှားမှုများလည်း ရှိခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန်ဒေသခံများက ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအကျဉ်းထောင်များတွင် ကျန်ရှိနေသေးသည့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၂၀၀၀ ခန့်ကို ပြန်လွှတ်ပေးရန် ကုလသမဂ္ဂအပါအ၀င် အမေရိကန်နှင့် မြန်မာ့အရေး ဆောင်ရွက်နေသည့် အာဆီယံလွှတ်တော်အမတ်များအဖွဲ့ (AIPMC) တို့မှ တိုက်တွန်းတောင်းဆိုနေသည့် အချိန်နှင့်တပြေးညီ ယခုကဲ့သို့ ကျန်ရှိနေသေးသည့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ပြန်လွှတ်ပေးရန် တောင်းဆိုသည့် စာရွက်ဖြန့်ဝေလှုပ်ရှားမှုများ ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 7:49 AM0comments
2011-10-15 RFA(ပေးပို့ သူ - ဗမာ့သွေး )
သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့က ထုတ်ပြန်တဲ့ ဒုတိယအကြိမ် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ လွတ်မြောက်လာသူတွေထဲမှာ ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျနေသူ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၂ ရာကျော် ပါဝင်တယ်လို့ ထိုင်းအခြေစိုက် AAPP ခေါ် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (မြန်မာနိုင်ငံ) က သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 7:47 AM0comments
အောက်တိုဘာလ ၁၅ရက်။ စောခါးစူး (ကေအိုင်စီ)(ပေးပို့ သူ - ဗမာ့သွေး )
ကော့ကရိတ်မြို့နယ်ရှိ ဆုံဆည်းမြိုင်နှင့် အူးကလေ့ထာ့ရွာအကြား၌ အစိုးရတပ်မှ ထော်လာဂျီကား ၂စီးဖြင့် သယ်ဆောင်လာ သော တပ်ရိက္ခာကို လက်နက်ကိုင် မဟာမိတ်တပ်များက ယနေ့ နေ့လည်တွင် သိမ်းဆည်းခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
တိုးတက်သောဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင်အမျိုးသားတပ်မတော်-DKBA၊ ရခိုင်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ-ALP နှင့် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး-ABSDF တို့ ပါဝင်သည့် မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့က အစိုးရတပ်ဘက်မှ သယ်လာ သော ဆန်၊ ပဲနှင့် အမဲဗူးတို့ကို သိမ်းဆည်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
DKBA မှ ဗိုလ်မှူးစောဆန်းအောင်က “ကျနော်တို့ သိမ်းဆည်းရတဲ့အချိန်မှာ အစိုးရတပ်က စစ်သားတွေ တစ်ယောက်မှ မတွေ့ ဘူး။ ကျနော်တို့အဖွဲ့တွေ လာတာသိလို့ ထွက်ပြေးတာ ဖြစ်မယ်။ ကားထဲမှာ ပစ္စည်းအပြည့်ပဲ။”ဟု ပြောသည်။
အစိုးရတပ်မှ ၎င်းတို့ တပ်ရိက္ခာ သယ်ဆောင်လာသည့် ထော်လဂျီကားမှာ ထိုဒေသရှိ ရွာသူရွာသားများ ကားဖြစ်သည်ဟု သိရ သည်။
ရိက္ခာ သိမ်းဆည်းခံရသည့် အစိုးရတပ်မှာ တပ်မ(၂၂) လက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့များ ဖြစ်သည်ဟု မဟာမိတ် ပူးပေါင်းတပ်များက ပြောသည်။
တဆက်တည်းမှာပင် ကော့ကရိတ်မြို့နယ်အတွင်း တာအုထာ့ရွာဘက်မှာလည်း DKBA နှင့် အစိုးရတပ်တို့အကြား ယနေ့ ပစ် ခတ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ အစိုးရဘက်မှ တစ်ဦး ကျဆုံးခဲ့သည်ဟု ဗိုလ်မှူးစောဆန်းအောင်က ပြောသည်။Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 7:46 AM0comments
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 7:45 AM0comments
2011-10-14 RFA(ပေးပို့ သူ - ဗမာ့သွေး )
အဲဒီ ခြေတစ်ဘက်ပြတ်သွားတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ကိုတင်ထွန်းအောင်ကို မင်္ဂလာဒုံစစ်ဆေးရုံမှာ ဆေးရုံ တင်ထားရာက သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ထုတ်ပြန်တဲ့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးတဲ့နေ့ မတိုင်ခင် စက်တင်ဘာ ၂၅ ရက်နေ့က မင်္ဂလာဒုံ စစ်ဆေးရုံကနေ ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကိုတင်ထွန်းအောင် မင်္ဂလာဒုံ စစ်ဆေးရုံမှာ တက်နေစဉ် မိုင်းထိတဲ့ အထမ်းသမား ၇ဦး ရှိတယ်လို့ ကိုတင်ထွန်အောင်က ပြောပါတယ်။
သာမန်အားဖြင့် နိုင်ငံရေးပုဒ်မနဲ့ အကျဉ်းကျသူတွေကို အထမ်းသမား ပေါ်တာအဖြစ် ပို့လေ့မရှိပေမယ့် ကိုတင်ထွန်းအောင်ကတော့ သူ့ကို ဘာကြောင့် ခုလို ခေါ်သွားတယ်ဆိုတာ မသိဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အကျဉ်းထောင်က ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာသူ ကိုဇာဂနာက အခုလို ပြောပါတယ်။
“ကျနော့် ဘယ်လိုပြောရမှန်း မသိအောင်ကို တော်တော် တုန်လှုပ်သွားတယ်။ အဲသလိုမျိုး ရက်ရက်စက်စက် ဖြစ်ရတဲ့ အဖြစ်အပျက် ဒါကို အားလုံး သိစေချင်တယ်။ အဲဒီတော့ ကျနော်ကတော့ လောလောဆယ် လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် ဦးဝင်းမြတို့ ခေါင်းဆောင်တဲ့ အဖွဲ့ ရှိနေတဲ့ အခါကျတော့ အဲဒီကို ဒီကိစ္စမျိုး တင်ပြသင့်တယ်လို့ ကျနော်ထင်ပါတယ်”
ကိုတင်ထွန်းအောင်ဟာ ဒဂုံတက္ကသိုလ် မြန်မာစာ ဒုတိယနှစ် ကျောင်းသားဖြစ်ပြီး ၂၀၀၈ခုနှစ်က မျိုးဆက်သစ် လူငယ်များ အစည်းအရုံးနဲ့ ဆက်သွယ်မှု ပုဒ်မ ၅၀၅ (ခ) နဲ့ ထောင်ဒဏ် ၈နှစ် အမိန့် ချခံရပြီး ပဲခူးထောင်က တစ်ဆင့် ဘားအံထောင် အဲ့ဒီကမှ ကရင်ပြည်နယ်ကို အထမ်းသမား အဖြစ် ပါသွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 7:44 AM0comments
ထောင်တွင်း လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု တကယ်ရှိလျှင် ဟန့်တားမည်
By သင်းသီရိ သောကြာ, 14 အောက်တိုဘာ 2011(ပေးပို့ သူ - ဗမာ့သွေး )
မကြာသေးခင်ရက်တွေကမှ အကျဉ်းထောင်တွင်းကနေ လွတ်လာတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေပြောနေတဲ့ အကျဉ်းသား အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံရမှု ကိစ္စတွေကို ခိုင်ခိုင်မာမာ အချက်အလက်တွေရှိရင် စုဆောင်းပြီး ဒီလိုပြသနာမျိုးတွေ နောင်မဖြစ်ရအောင် တားမြစ်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိတယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်က ပြောပါတယ်။ ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျနေသူတချို့ လွတ်လာတာကို မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်က ကြိုဆိုပြီး နောက်ထပ် ဆက် လွှတ်ပေးဖို့အတွက်တော့ လတ်တလောမှာ တောင်းဆိုဖို့ အစီအစဉ် မရှိသေးဘူးလို့လည်း ပြောပါတယ်။ ဒီအကြောင်းတွေကိုတော့ မသင်းသီရိက တင်ပြထားပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာ ၁၂ ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ လွှတ်ပေးလိုက်တဲ့ နိုင်ငံတ၀ှမ်း အကျဉ်းထောင်တွေထဲက ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျနေသူ ဦးရေ ၂၀၀ နီးပါး ပါလာပြီးတဲ့နောက် အကျဉ်းထောင်တွင်းကြုံကြရတဲ့ အကျဉ်းသားအခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေ၊ ဖမ်းဆီးစဉ်ကာလတွေက စစ်ကြောရေးစခန်းတွေမှာ ကြုံရတဲ့အခြေအနေတွေကို လွတ်လာတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတချို့က ပြောပြနေကြတာပါ။ ဒီ အချက်အလက်တွေဟာ ခိုင်ခိုင်မာမာရှိတယ်ဆိုရင် ဒီအချက်အလက်တွေကို စုဆောင်းပြီး ဟန့်တားဖို့ အစီအစဉ်ရှိတယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြက ပြောပါတယ်။
“အကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာ ချိုးဖောက်တဲ့အနေအထားမျိုးလေးတွေ ရှိရင်တော့ ကျနော်တို့ ဒါတွေကို လေ့လာပြီးတော့ ချိုးဖောက်မှုတွေကို လျော့နည်းအောင် ဆောင်ရွက်ဖို့တော့ ကျနော်တို့ စိတ်ကူးရှိပါတယ်။ စွပ်စွဲတာတွေကိုတော့ ကျနော်တို့ ကြားသိရတာပေါ့နော်။ ဒီလို ချိုးဖောက်တယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်မျိုးတွေ ကြားသိရတာရှိတယ်။ ဒါတွေက ခိုင်ခိုင်မာမာ ဖြစ်လာတာမျိုးဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့ ဒါကို တားမြစ်ဖို့အတွက် တစ်စုံတစ်ခု ဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်တွေ ရှိပါတယ်။”
ဒီတော့ အခုပြန်လွတ်လာတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့ ဦးဝင်းမြတို့ လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်က တွေ့ဖို့ မေးမြန်းစုံစမ်းဖို့ အစီအစဉ်ရော ရှိပါပြီလားရှင့်။ -
“ကျနော်တို့ကတော့ အဓိကအားဖြင့် ကျနော်တို့ တိုင်ကြားတာတွေကို စိစစ်ပြီးတော့ ဆောင်ရွက်ပေးတာကို လောလောဆယ်မှာတော့ ကျနော်တို့ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ အစီအစဉ်တော့ မရှိသေးပါဘူး။ ဒီလို ချိုးဖောက်မှုတွေ ရှိလာမယ်ဆိုရင်တော့ ဒါမျိုးကို ကျနော်တို့ စဉ်းစားပြီးတော့ ကောင်းမွန်သွားအောင် ပြင်ဆင်နိုင်အောင် ကျနော်တို့ ဆောင်ရွက်ရမှာပေါ့။ စွပ်စွဲယုံသက်သက်နဲ့တော့ လုပ်လို့မရဘူးပေါ့။ အဲဒီတော့ ကျနော့်ရဲ့အမြင်ကတော့ စွပ်စွဲတာတွေတော့ အများကြီးပဲ ရှိတယ်၊ ဒါတွေကို ခိုင်မာတဲ့ အထောက်အထားတွေ ရှိလာတာမျိုးဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့ စုံစမ်းပြီးတော့ ဒါကို ပြုပြင်ဖို့ ဆောင်ရွက်ရမှာ ကျနော်တို့ ကော်မရှင်ရဲ့တာဝန် ဖြစ်ပါတယ်။”
မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်က လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် မပေးခင် တစ်ရက်အလိုကပဲ ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျနေသူတွေကို လွှတ်ပေးဖို့ သမ္မတဆီကို တောင်းဆိုခဲ့တာဆိုတော့ အခု နောက်ထပ် ထောင်တွေထဲမှာ ကျန်နေသေးတဲ့ သူတွေ ဆက်လွတ်ပေးဖို့ ထပ်ပြီးတောင်းဆိုဖို့ အစီအစဉ်ရော ရှိပါလား။ -
“အခုလောလောဆယ်မှာတော့ ထပ်ပြီးတောင်းဖို့ အစီအစဉ်မရှိဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အခု လွှတ်ပေးလိုက်တယ် ဆိုတာကိုပဲ ကျနော်တို့ အားရ၀မ်းသာစွာနဲ့ ကြိုဆိုတာပေါ့နော်။ နောက် ထပ်ပြီး လွှတ်မယ်လို့လည်း မျှော်လင့်နိုင်တာပေါ့။ အခြေအနေတစ်ခုကို အချိန်အခါမပေးဘဲနဲ့ တအား တွန်းပြီးတော့ တောင်းတယ်ဆိုရင်လည်း negative သက်သက်ပေါ့နော်၊ ပြောင်းပြန်ရလဒ်ဖြစ်သွားတာမျိုး မလုပ်သင့်ဘူးလို့ ကျနော် မြင်ပါတယ်။”
မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်ရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြကို ဆက်သွယ် မေးမြန်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသာ ဒါမှမဟုတ် ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းခံနေရသူတွေကို ချွင်းချက်မရှိ အမြန် လွှတ်ပေးရေး အဆိုကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ ကန့်ကွက်သူမရှိ ထောက်ခံထားပြီး ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌကလည်း သမ္မတဆီကို ဒီတောင်းဆိုချက် သ၀ဏ်လွှာ ပေးပို့ထားတာပါ။ ဒါ့ကြောင့် အောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်နေ့ လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေ ပြန်စရင် ဒီအချက်ကို ဆက်ပြီးဆောင်ရွက်ပေးဖို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံ တောင်းဆိုမယ်လို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးသိန်းညွှန့်က ပြောပါတယ်။
“အခု ဒီလွှတ်တော်ကို ကျနော် ပြန်ရောက်တဲ့နေ့မှာကို ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျနေကြတဲ့ အကျဉ်းသားတွေ အပါအ၀င် နောက်ထပ် နှစ်သုတ် သုံးသုတ် လွှတ်နိုင်ဖို့အတွက် ဆက်လက်ပြီးတော့ ကျနော်တို့ ကြိုးစား ဆောင်ရွက်ပါမယ်။ အကျဉ်းသားတွေရဲ့ ပြောဆိုချက်တွေကို လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းကို ကျနော်တင်ပြပါမယ်။ တချိန်တည်းမှာ ကျနော် ဆောင်ရွက်လို့ရမယ့်အရာ အားလုံးကို အခု လွှတ်တော် ပြစတာနဲ့ ကျနော် ဆောင်ရွက်ပါမယ်။”
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသိန်းညွှန့် ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအင်အားစု NDF ပါတီကလည်း အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး၊ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့အတူ လူမှုဘ၀တွေ တိုးတက်ရေးနဲ့ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့ထားမှုတွေ ဖယ်ရှားနိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အားလုံးကို ချွင်းချက်မရှိ အမြန်လွှတ်ပေးဖို့ကို ဒီကနေ့ တောင်းဆိုထားပါတယ်။Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 7:43 AM0comments
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 7:42 AM0comments
2011-10-14(ပေးပို့ သူ - ဗမာ့သွေး )
ဒီ အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်း ဥပဒေအရ The Trade Unions Act 1926 ၁၉၂၆ ခုနှစ် အလုပ်သမား သမဂ္ဂ အက်ဥပဒေကို ဖျက်သိမ်းလိုက်တယ်လို့လည်း ဖော်ပြပါတယ်။ အလုပ်သမားတွေရဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့၊ အလုပ်သမား အချင်းချင်းကြား၊ အလုပ်ရှင်နဲ့ အလုပ်သမားကြား ဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်စေဖို့နဲ့ အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းတွေကို စနစ်တကျ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကနေ ဒီဥပဒေကို ပြဌာန်းလိုက်တာလို့ ဆိုထားပါတယ်။
ဒါဟာ နိုင်ငံတကာမှာ ဖွဲ့စည်းတဲ့ အလုပ်သမား သမဂ္ဂပုံစံမျိုး မဟုတ်ဘဲ အရင် မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ် လက်ထက်က ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ အလုပ်သမား အစည်းအရုံးနဲ့ ဆင်တူတယ်လို့ ရန်ကုန်မြို့က ရှေ့နေကြီး ဦးရောဘတ်စန်းအောင်က ရှုမြင်ပါတယ်။ “ကြည့်ရတာကတော့ အရင် မဆလခေတ်က အခြေခံ အလုပ်သမား အစည်းအရုံး ပုံစံမျိုးပါပဲ။
မြို့နယ် ခရိုင် တိုင်း ဗဟို ဆိုပြီးတော့ ဖော်ပြထားတယ်။ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဖွဲ့စည်းခွင့် ရမယ်ဆိုတဲ့ အနေအထားမျိုး မရှိဘူး။ မှတ်ပုံတင်ဖို့ဆိုတာ ပါနေတယ်။ အလုပ်သမားထုကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ အစည်းအရုံးလို့တော့ ကျနော်တို့ မသုံးသပ်မိဘူး” အခန်း ၁၄ ခန်းပါရှိတဲ့ ဒီ ဥပဒေ အခန်း (၁) အပိုဒ် (ဆ) မှာ သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့တကွ ဖော်ပြထားတဲ့ သပိတ်မှောက်ခြင်း ဆိုတဲ့ စကားရပ်ပါရှိပြီး အခန်း (၃) မှာ အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်း မှတ်ပုံတင်ရမယ့် စည်းကမ်းချက်တွေကို ဖော်ပြထားပါတယ်။
နိုင်ငံတော် သမ္မတက တာဝန်ပေးအပ်တဲ့ မှတ်ပုံတင် အရာရှိချုပ်က မြို့နယ် မှတ်ပုံတင် အရာရှိကို တာဝန်ပေးအပ်ရမယ်လို့ ပါရှိပါတယ်။ ဒီ အခန်း (၃) အပိုဒ် (၁၀ ) မှာ သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းဟာ မိမိ အဖွဲ့အစည်းနဲ့ လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်ပြီး ဒီ ဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်တွေနဲ့ မဆန့်ကျင်စေဘဲ ဒီဥပဒေက သတ်မှတ် ထားတဲ့ အချက်တွေပါဝင်တဲ့ အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ စည်းမျဉ်းတွေကို အဖွဲ့အစည်းဝင် အများစုရဲ့ သဘောတူညီချက်နဲ့ ရေးဆွဲရမယ်လို့လည်း ပါရှိပါတယ်။
ဒီကန့်သတ်ချက် တွေကြောင့် ပုဂ္ဂလိကတွေ အနေနဲ့ အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခွင့်ရမယ့် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးတယ်လို့ ရှေ့နေကြီး ဦးရောဘတ်စန်းအောင်က သုံးသပ်ပါတယ်။ “ပုဂ္ဂလိက အနေနဲ့ကတော့ အလုပ်သမား အစည်းအရုံး ဖွဲ့လို့ရမှာ မဟုတ်ဘူး။ အလုပ်သမားထုရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို လက်တွေ့ ဆောင်ရွက်နေတဲ့ စမ်းချောင်းက ကိုသက်ဝေ ခေါ် ကိုပေါက်စတို့ သင်္ကန်းကျွန်းက ဒေါ်အေးရင်သန်းတို့ စတဲ့ သူတွေက လုပ်ကိုင်ခွင့် ရမယ် မထင်ဘူး။ မှတ်ပုံတင်တာ လိုင်စင်လျှောက်ရမယ့် အနေအထား ရှိတယ်” ဒီ ဥပဒေမှာ တားမြစ်ချက်နဲ့ ဒီ တားမြစ်ချက်တွေကို ဖောက်ဖျက်ရင် ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်နိုင်တဲ့ အကြောင်းကိုလည်း ပြဌာန်းထားပါတယ်။Rest of your post
By ဗွီအိုအေ (မြန်မာဌာန) သောကြာ, 14 အောက်တိုဘာ 2011(ပေးပို့ သူ - ဗမာ့သွေး )
ပျက်ကျသွားတဲ့ လေယာဉ်က ဘာ အမျိုးအစားလဲ ဆိုတာကိုတော့ အတိအကျ မပြောနိုင်သေးပါဘူး။ CCTV က ပျက်ကျသွားတဲ့ ဂျက်လေယာဉ်ဟာ ရှာလောန်း (Xiaolong) FC-1 Fierce Dragon ဖြစ်တယ်လို့ ပြောနေပြီး ဆင်ဟွာသတင်းကတော့ JH-7 Flying Leopard ဖြစ်တယ်လို့ ပြောနေပါတယ်။Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 7:41 AM0comments
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 7:40 AM0comments
မိုးဗြဲရေကာတာ ဖောက်ချသဖြင့် ကယားပြည်နယ် လွိုင်ကော်မြို့ရေလွှမ်း
Published on October 14, 2011 by မန်းစိုင်းမွန် ·(ပေးပို့ သူ - ဗမာ့သွေး )
ကယားပြည်နယ် မိုးဗြဲရေကာတာက ရေဖောက်ချလို့ လွိုင်ကော်မြို့တဝိုက် ရေလွှမ်းမိုးနေပါတယ်။
မိုးဗြဲရေကာတာကို သက်ဆိုင်ရာကဖောက်ချတာကြောင့် အောက်တိုဘာလ ၁၀ ရက်ကစြပီး လွိုင်ကော်မြို့နားက ရွာတချို့ရေမြုပ်ကုန်တယ်လို့ ရေဘေးလွတ်ရာ တိမ်းရှောင်လာတဲ့ ဒေသခံတဦးက ပြောပါတယ်။
“စက်တင်ဘာ၂၈ ရက်ကစပြီးတော့ ရေလွှတ်တယ်။ ၉ ရက်မြောက်တဲ့အခါ ဖောင်းတောရယ်၊ ဘုရားဖြူရယ် ဘုရားနီရယ်မှာ အိမ်ခြေက ၃၀ဝ ကျော်မယ်။ လူဦးရေက ၂၀ဝ၀ဝ လောက်ရှိမယ်။ အဲဒီမှာ မြုပ်ကုန်ပြီ။ လူတွေ အကုန်လုံးပြောင်းကုန်ပြီ။ လွယ်ကော်ဘက်နန်းကွတ်က တကယ့် စိုးရိမ်ရတဲ့ နေရာတွေ အဲဒီမှာရေထပ်များလာရင်တော့ ဟိုးဘက်အောက်ရေကလျှံသွားမှာလေ။”
KDRG ခေါ် ကရင်နီဖွံ့ဖြိုး ရေးသုတေသနအဖွဲ့က တာဝန်ခံ ခူသောရယ်က ရေဘေးဒုက္ခသည်တွေမှာ အရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
“ရေကလည်းဖောက်ချနေတုန်းပဲ။ ရွာ ၃ ရွာကတော့ ရေမြုပ်တာပေါ့နော်။ တထပ်အိမ်ဆို ခေါင်မိုးအထိ ရေရောက်တယ်။ ဘုရားဖြူ ဘုရားနီ၊ ခေါင်းတော အဲဒီမှာတော့ ရေအဆိုးရွားဆုံးကြီးတယ်။ လွိုင်ကော်မြို့ပေါ်တွေမှာလည်းကြီးတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ ၃ ရွာလောက်တော့ ရေက မတက်ဘူးပေါ့။ အစိုးရက လူတွေကို ထွက်သွားဖို့တော့ တိုက်တွန်းတာတွေရှိတယ်။ အကူအညီကတော့ ဒေသခံလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကပဲ သူ့နည်းသူ့ဟန်၊ ကိုယ်ထူကိုယ်ထနဲ့ပဲ အချင်းချင်းကူကြတယ်။
သူတို့ အရေးတကြီး လိုအပ်နေတာက လောင်စာပေါ့နော်၊ မီးသွေး။ သောက်ရေရယ်၊ အစားအစာပေါ့၊ နောက်တခုက ဆေးဝါး။”
မိုးဗြဲရေကာတာက ရေဆက်စပ်စီးဆင်းလာတဲ့ ဘီးလင်းချောင်းမြစ်ဝှမ်းတလျှောက်မှာရှိတဲ့ စိုက်ပျိုးရေးနယ်မြေတွေ ရေလွှမ်းမိုးတာကြောင့် စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်သီးနှံတွေ ပြတ်လပ်လာတဲ့အပြင် ဆန်ဈေး ၂ ဆနီးပါးတက်သွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
အရင် ကျပ် တသောင်းခွဲပေးရတဲ့ သုံးပုံးဝင် ရှမ်းဆန်အိတ်ငယ်တအိတ်ကို အခု ကျပ် ၂ သောင်းခွဲနီးပါးပေးရြပီး ဗမာဆန်ကတော့ ကျပ် တသောင်းခွဲအထိ ဈေးတက်နေပါတယ်။
ကယားပြည်နယ်မှာ မနှစ်က မိုးခေါင်ခဲ့လို့ ဆန်စပါးမထွက်နိုင်ခဲ့သလို အခုနှစ်မှာတော့ ရေလွှမ်းမိုးမှုကြောင့် စိုက်ပျိုးထားတဲ့ဆန်စပါးတွေ အားလုံးနီးပါးပျက်စီးကုန်ပြီဟု ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
ကယားပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ ရေအားလျှပ်စစ် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံကို ပံ့ပိုးဖို့မိုးဗြဲရေကာတာကို မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ ဦးနေဝင်းအစိုးရလက်ထက် ၁၉၆၂ခုနှစ်မှာ စတင်တည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရေကာဆောက်လုပ်မှုကြောင့် ကယား၊ ကယန်း၊ ပဒေါင်နဲ့ ပအို့လူမျိုးတွေအခြေချနေထိုင်ခဲ့တဲ့ ရွာပေါင်း ၂၄ ရွာ ရေအောက်ကို မြုပ်သွားပါတယ်။
မိုးဗြဲရေကာတာရေလျှံမှုကြောင့် ကယားပြည်နယ်မှာ အခုလို ရေလွှမ်းမိုးမှုတွေ ဖြစ်နေပေမယ့် မြန်မာအစိုးရနဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့ နားလည်မှု စာချွန်လွှာတွေအရ တရုတ်ကုမ္ပဏီဟာ ဒီနှစ်အတွင်း ရေကာတာ ၃ ခုကို ကယားပြည်နယ်အတွင်း တည်ဆောက်ရေးအတွက် ပြင်ဆင်နေကြတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။Rest of your post
(ပေးပို့ သူ - ဗမာ့သွေး)
ဖြေ၊ အဲဒါတော့ ဦးသိန်းစိန် သွားမေးမှ သိမယ်။ ကျွန်တော်လည်း ဘယ်လိုလုပ် သိမလဲ။ မထူးဆန်းလှပါဘူး၊ ကျွန်တော့်ကို ထောင်ချကတည်းက ချမှတ်တဲ့ ပုဒ်မတွေကို ပြောရင်ရယ်စရာကြီး၊ ဟာသအနေနဲ့ ပြောရရင် ဥပမာ ကျွန်တော့်ကိုချတော့ ဗီဒီယို အက် ဆိုတာပါတယ်။
အဲဒီဗီဒီယိုအက်က ဘာလို့ ၃ နှစ်ချလဲလို့ ကျွန်တော်မေးတော့ နာဂစ်မုန်တိုင်း ဓါတ်ပုံပါလို့တဲ့၊ မုန်တိုင်းတိုက်တာနေတာ ဘာလို့လဲ ၊ ဆင်ဆာမတင်လို့တဲ့၊ မုန်တိုင်း တိုက်တာကို ဆင်ဆာတင်ရဦးမှာလား၊ ကျွန်တော်ပြောတာ မုန်တိုင်းတိုက်တဲ့ အလုပ်ကို ခဏရပ်ထားဦး ရိုက်ကူးရေး သွားတင်ပါရစေဦးလို့ ပြောလို့မရဘူးလေ။
နောက်အင်တာနက်ပုဒ်မ အားလုံး အင်တာနက် သုံးတဲ့သူတွေပါ၊ ဒီအင်တာနက် ပုဒ်မမှာ ကျွန်တော့်ကို အမိန့်ချတဲ့ တရားသူကြီးက အင်တာနက်ဆိုတာ မသိဘူး။
ဒီပုဒ်မတွေနဲ့ အီးမေးလ် စာတစောင်ကို ၁၅ နှစ်နဲ့ချလိုက်တာ၊ ကြားမကြားဖူးဘူး၊ ကျွန်တော့်ဆီ ရောက်လာရင် ကြည့်ရမှာပေါ့၊ ဘာကြောင့်လွှတ်လဲဆိုရင် ဒီလိုနေရတာတောင် ပိုများသေး။Rest of your post
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ဆက်လွှတ်ရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တောင်းဆို
B ဧရာဝတီ on October 12, 2011 1:46 pm in သတင်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ဆက်လွှတ်ရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တောင်းဆို
မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အစိုးရသစ်က နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတချို့ လွှတ်ပေးလိုက်သည်ကို
ကြိုဆို ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောဆိုပြီး နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ဆက်လွှတ်ပေးရမည်ဟု တောင်းဆိုလိုက်သည်။
ယနေ့နံနက် ၁၀ နာရီခန့်က ရန်ကုန်မြို့တော်ဝင်နှင်းဆီ ခန်းမတွင်ကျင်းပသော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများ ကန်တော့ပွဲအပြီး သတင်းထောက်များနှင့်တွေ့ဆုံစဉ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြည်တွင်းသတင်းထောက်များကပြောပြ သည်။
“နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား တယောက်လွှတ်လည်း ကျေးဇူးတင်တယ်။ လောလောဆယ်သိထားတာ ၁၀၀ လောက်လွှတ်ပြီလို့ သိထား တယ်။ ဘာပဲပြောပြောလွှတ်တာ ကျေးဇူးတင်တယ်။ အားလုံးကို ဆက်လွှတ်ပေးရမယ်။ လွှတ်ပေးမယ်လို့လည်း မျှော်လင့်တယ်” ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောသည်။
သတင်းစာဆရာကြီးဦးဝင်းတင်ကမူ အကျဉ်းသားများလွှတ်ပေးမှုကို ကြိုဆိုသော်လည်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကို အခြားပြစ်မှုအကျဉ်းသားများနှင့်အတူ တစ်တန်းတည်းထား လွှတ်ပေးခြင်းကို ကျေနပ်မှုမရှိကြောင်း ပြောကြားသည်။
ရန်ကုန် အင်းစိန်ထောင်နှင့် ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိ အလုပ်စခန်းများမှ အကျဉ်းသား ၆၄၂ ဦး လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပေးမည်ဖြစ် ပြီး နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၇ ဦး ပါဝင်ကြောင်း အင်းစိန်ထောင် တာဝန်ခံ အရာရှိ ဦးကျော်ခင်က ပြောသည်။
ထိုသို့ လွှတ်ပေးရာတွင် ပြစ်ဒဏ်ကျခံနေရသော တပ်မတော် ထောက်လှမ်းရေးများ မပါဝင်ကြောင်း ဦးကျော်ခင်က ဆိုသည်။
လူရွှင်တော်ဇာဂနာ လွတ်မြောက်ပြီဟု မိသားစုဝင်များ အဆိုအရ သိရသော်လည်း ယခုအချိန်အထိ လွတ်မြောက်လာသော နိုင်ငံ ရေး အကျဉ်းသား စာရင်း အပြည့်အစုံကို မသိရှိရသေးပေ။
ထိုင်းနိုင်ငံ အခြေစိုက် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး အသင်း(AAPP)၏ စာရင်းအရ မြန်မာနိုင်ငံ အကျဉ်း ထောင်များအတွင်း နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားပေါင်း ၂၀၀၀ ၀န်းကျင်ရှိကြောင်း သိရသည်။
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 3:28 AM0comments
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 3:26 AM0comments
ဗိုလ်ချုပ်ဆေထဲန့် ထောင်မှလွတ်မြောက် အခြားခေါင်းဆောင်များမလွှတ်သေး
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ အောက်တိုဘာလ 12 ရက် 2011 ခုနှစ် သျှမ်းသံတော်ဆင့် သတင်း - သျှမ်းသံတော်ဆင့်သတင်း(ပေးပို့ သူ ဗမာ့သွေး)
အစိုးရသစ်ကြေငြာထားသည့်အတိုင်း အကျဉ်းသား ခြောက်ထောင်ကျော်လွှတ်ပေးခဲ့သော်လည်း သျှမ်း ခေါင်း ဆောင်များအနက် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ဗိုလ်ချုပ်ဆေထဲန့်တဦးတည်းသာ ပါလာကြောင်း သျှမ်းနိုင်ငံရေး အသိုင်းအဝိုင်းကပြောပါသည်။
“ဗိုလ်ချုပ်ဆေထဲန့် အခုလိုလွတ်မြောက်လာတာဝမ်းသာမိတယ်။ ဒါပေမယ့် ခွန်ထွန်းဦး၊ စိုင်းညွှန့်လွင်နဲ့ တခြားခေါင်းဆောင်တွေ လွှတ်ပေးတဲ့အထဲမှာပါမလာဘူး” - ဟု သျှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ ပြောခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ် စိုင်းလိတ်ကပြောပါသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေထောင်၌ ထောင်ဒဏ် ၁၀၆ နှစ် ကျခံထားရသည့် သျှမ်းပြည် တပ်မတော်(မြောက်ပိုင်း) ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်ဆေထဲန့် ယနေ့ နံနက်ပိုင်း၌ ထောင် မှ လွတ်မြောက်လာသည်ဟု မိသားစု ဝင်တဦးက ပြောပါသည်။
“အဖေလွတ်မြောက်လာတဲ့အတွက် အတိုင်းမသိဝမ်းသာတယ်။ ကျမတို့မိသားစုက ရန်ကုန်လေဆိပ်က နေဘဲ စောင့်ကြိုတာ။ အဖွဲ့အစည်းကခေါင်း ဆောင် တွေတော့ စစ်တွေအထိ သွားကြိုတယ်လို့တော့ကြားတယ်။ ဒီည ရန်ကုန်မှာ တညနေမယ်။ မနက်ဖြန်လားရှိုးတက်မယ်။” ဟု သမီးဖြစ်သူ က ပြောပါသည်။
အလားတူ ဖခင်ဖြစ်သူနှင့်အတူ အဖမ်းခံရသော အခြားခေါင်းဆောင်များကိုလည်း အမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးပါရန်နိုင်ငံတော် အစိုးရအား ဗိုလ်ချုပ်ဆေထဲန့်၏သမီးဖြစ်သူ နန်းခမ်းပေါင်းကပြောသည်။
“ ဒါပေမယ့် အဖေနဲ့အတူ အဖမ်းခံရတဲ့ သျှမ်းခေါင်းဆောင်တွေသတင်း ဘာမှမကြားရသေးတဲ့အတွက် စိတ်မကောင်းကြဘူးပေါ့နော်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အချင်းချင်း ဖေးဖေးမမ နေလာခဲ့ဖူးတဲ့လူတွေဆိုတော့နော်။ အခုလို အဖေ့ကိုလွှတ်ပေးတဲ့ နိုင်ငံတော်အစိုးရကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့သျှမ်းခေါင်းဆောင်တွေ ကိုလဲ အမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးဖို့ အလေးအနက်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင့်”
SNLD ပါတီ ဥက္ကဌ ခွန်ထွန်းဦး၏ ဇနီးဒေါ်ဝေဝေလွင်ကလည်း ဥက္ကဌကြီးနှင့်တပြိုင်နက် အဖမ်းခံရသူများ အနက် မည်သူများလွတ်မြောက်လာ၍ မည်သူများကျန်နေသည်ကို အသေးစိတ်မသိရသော်လည်း လွတ်မြောက်သူများ အနက် ဥက္ကဌကြီးမပါမချင်း မျှော်နေဦးမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောသည်။
“လွှတ်မယ့်အကြောင်းလဲ ဒီဗီဘီ တီဗီကိုကြည့်မှသိရပါတယ်။ လွှတ်မြောက်လာတဲ့ စဝ်ဆေထဲန့်မိသားစုနဲ့လဲ မဆက်သွယ်ရတော့ သူတို့ ဘာတွေစီစဉ်မယ်ဆိုတာလဲ မသိရပါဘူး။ နိုင်ငံတော်အစိုးရကို တောင်းဆိုချင်တာ တခု ကတော့ ကျမတို့ SNLD ဥက္ကဌကြီး စဝ်ခွန်ထွန်းဦးကို လွှတ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ သူဟာ အသက်လဲကြီး ပါပြီ။ ကျန်းမာရေးလဲ မကောင်းတဲ့ခါကျတော့ ဆေးကုခွင့်ရဖို့ လွှတ်ပေးစေချင်တယ်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ စဝ်ဆေထဲန့်လွှတ်မြောက်လာတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်။ ဥက္ကဌကြီးကိုလဲ မလွတ်မချင်းမျှော်နေမှာဘဲလို့ ပြော ချင်ပါတယ်”
အသက် ၇၇ နှစ် အရွယ်ရှိ ဗိုလ်ချုပ်ဆေထဲန့်သည် ၁၉၈၉ က သျှမ်းပြည်တပ်မတော် (မြောက်ပိုင်း) အပစ် ရပ် ရေး၌ ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ် သျှမ်းပြည်ပညာရှင်များ အတိုင်ပင်ခံ ကောင်စီ ဖွဲ့စည်းခြင်းကို အကြောင်း ပြုပြီး စစ်အစိုးရက ပြည်ထောင်စုမှ ခွဲထွက်လိုမှုအပါဝင် အခြားအမှုပေါင်းများစွာစွပ်စွဲပြီး ထောင်ဒဏ် ၁၀၆ နှစ် ပစ်ဒဏ်ဖြင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်း ခန္တီးထောင်သို့ ပို့ဆောင်ချုပ်နှောင်ခဲ့သည်။ ယခုနှစ်ဦးပိုင်းမှာမူ ခန္တီးထောင်မှ စစ်တွေထောင် သို့ ပြောင်းလဲအကျဉ်းချရာမှ ယနေ့လွတ်မြောက်ချိန်အထိ ဖြစ်သည်။
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 3:25 AM0comments
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 3:24 AM0comments
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ အောက်တိုဘာလ 12 ရက် 2011 ခုနှစ် ဖဲမော့ သတင်း - ကန္တာရ၀တီတိုင်း(မ်)
ကရင်နီပြည်နယ် လွိုင်ကော်မြို့၏ အပေါ်ဘက် ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းတွင် တည်ရှိသော မိုးဗြဲရေ ကာတာအကြောင်း သတင်းမီဒီယာများသို့မရောက် စေရန် ဓါတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယို မှတ်တမ်းသွားရောက်ကူး ခွင့်မပြုဘဲ လုံခြုံရေးတင်းတင်း ကျပ်ကျပ်ချထား သည်ဟု သိရသည်။
“မိုးဗြဲကန်ဆည်ရေဖောက်ချတာတောင် လွိုင်ကော်မြို့မှာရှိတဲ့ ကျေးရွာအချို့ နေအိမ်များရေမြုပ်ခံရရင်မိုးဗြဲရေကာတာ ပြိုကျရင်တော့ ရေတွေအရှိန်အဟုန်နဲ့ ကြီးမားစွာစီးဆင်းလာပြီးတော့ လွိုင်ကော်မြို့တစ်မြို့လုံးက မလွဲမသွေ ရေထဲပါသွားနိုင်တယ်” ဟု ဆရာတော်ရယ်က ဆက်ပြောပါသည်။
မိုးဗြဲဆည်သည် ဆယ်စုနှစ် ၅ စုကျော်မျှရှိနေပြီဖြစ်၍ သတ်မှတ်ထားသော သက်တမ်းထက် ၁၀နှစ်ပိုနေပြီဖြစ်သော ကြောင့် ပြိုကျမည့်အန္တရာယ်ကို ဒေသခံတို့အနေဖြင့် စိုးရိမ်ပူနေကြကြောင်း လွိုင်ကော်မြို့ခံတဦးက ပြောပါသည်။
မိုးဗြဲရေကာတာကြီးကို မြန်မာနိုင်ငံတော်လှန်ရေး အစိုးရလက်ထက်တွင် ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး မောင်ရွှေ ဦးဆောင် သည့် စက်မှုလက်မှုဝန်ကြီးဌာန၏ စီမံကိန်းနှင့် ဥက္ကဌ ဗိုလ်မှူး ဖေသန်း ကြီးမှူးသည့်လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ပေးရေး အဖွဲ့သည် ၁၉၇၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့တွင် လူထုလုပ်အားများဖြင့် တည်ဆောက်ပြီးစီးခဲ့သည်
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 3:23 AM0comments